★I-STUDIO LOFT★ Limetree Resort Secluded Beach ★ - I-Airbnb
★I-STUDIO LOFT★ Limetree Resort Secluded Beach ★
St. Thomas, i-U.S. Virgin Islands
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Resort
U-Resort Ungumbungazi ovelele
Ibekwe ogwini lolwandle olucezile lwe-Caribbean ekupheleni kwesiqhingi esiseningizimu, lena indawo enhle ngasolwandle. Uma ukhetha iholidi lakho lase-St. Thomas elingenazixuku, le ndawo yokungcebeleka ingcono kakhulu kuyo yomibili imihlaba - ikude nokuningi ongakwenza esizeni, kodwa eduze kwase-Charlotte Amalie nezinye ezihehayo eziqhingini.
Wonke amayunithi eSitudiyo afika nombhede we-King kanokusho kanye ne-Queen Sleeper Sofa ukuze aqedele izidingo zokuhamba zothando kakhulu, futhi eza namakhishi amancane anamamicrowave, izikhi zekhofi, namafriji amancane.
Siphatha lesi sakhiwo ngaphandle kwendawo, ngakho-ke ngeshwa ngeke sibe nenjabulo yokuhlangana nawe mathupha kodwa zizwe ukhululekile ukusithumelela umyalezo, i-imeyili, noma usishayele uma kukhona okudingayo.Futhi, izisebenzi zedeski elingaphambili zitholakala amahora angu-24 ngakho uma kukhona okudingekayo ngesikhathi sokuhlala kwakho zizwe ukhululekile ukubashayela ucingo futhi bazokwazi ukukusiza.
Siphatha lesi sakhiwo ngaphandle kwendawo, ngakho-ke ngeshwa ngeke sibe nenjabulo yokuhlangana nawe mathupha kodwa zizwe ukhululekile ukusithumelela umyalezo, i-imeyili, noma usish…
UResort Ungumbungazi ovelele